Hubi feature-caado qowladda pachinko [Hawlgallada Set Horukon]
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Hubi feature-caado qowladda pachinko [Hawlgallada Set Horukon]
Marka dad badan oo u baxay inuu ka ciyaaro qowladda pachinko ah, waxaan u maleynayaa in lagu hubiyo xogta in laambad xogta. Haddii aad uma arko ee xogta, taas oo madal waa nooca socodka, waxba ma yaqaaniin waxa ay la timaado. laambad Data waa macluumaadka xogta macaamiisha. In si la mid ah sida tan, waxaan leenahay mashiinka a in sidoo kale waa in dukaanka si uu u bedelo laambad xogta.
qowladda pachinko iyo Horukon, ayaa mashiinka a kaas oo la sheegay in dukaan computer rasmi ah xogta oo dhan. Isagoo ka hadlayay waxa la arko ee Horukon, hadlayay mid ka mid by mid ka mid ah miiska ciyaaraha ah, tirada tallaalmid iyo lambarka Ghanna jeer iyo qadarka la geliyo, iyo, in waxa ka soo baxa heer ah sida badan, la nuugo ilaa xogta loo gudbiyo sida kala mashiin aad.
sidoo kale kale
, iyo mid kasta oo xogta wadar ahaan iyo dukaamada oo dhan oo ka mid ah xogta celcelis ahaan loogu talagalay jasiiradda kasta, waxaad u leeyihiin in ay si sax ah u maareeyaan noocyo kala duwan oo xogta.
Horukon, si aad u leeyihiin in la kordhiyo xog sax ah, by Samo falku inaad jiritaankeeda, kooxda martida pachinko, goor hore la ogaado iyo failure taagan helay fal Goto, sidoo kale, iyo sidoo kale ka eegi kartaa dhibaatooyinka sida xarkaha soo baxay waa waxaan haystaa. In jidadka
, ama waxaan gelin habkan qabtay in la sheegay in ay qabtay Horukon ah. Indeed, waxa ay u muuqataa sida waxaa sidoo kale waa Horukon in falkaas oo kale noqon karaan. Well waxa la sheegay in ay qabtay conserver hoolka, taas oo la sheegay waxaa sidoo kale loo yaqaan aragti guul caado of Horukon this. Iyadoo la tixraacayo isbedelka of heshay
iyo ixtimaalka in xaaladda dukaanka, waxa la sheegay in hawlgalka noqon kartaa. Tan iyo Horukon sidoo kale waa mashiinka, aad ka soo Baxday waa wax la yiraahdo caado of mishiinka.
Tusaale ahaan, waxa inta badan loo, si ay u muujiyaan Ghanna Toka waa kubad hal walba, sidaa darteed kubad ka baxay maqan tahay, baabuurta yar jasiiradda kasta, kubad gelin ama, miiska geeska si fiican oo kaliya waa Toka ku dhuftay, dhamaadka tirada, waxa la sheegay in ay awoodaan in ama la sii daayay si ula kac ah heshay koox gaar ah.
socday in ay qabsadaan isha waa hab qabashada Horukon.
_x000D In _ ah, ama si aad u aragto meesha si gaar ah waa marka performing khiyaameeya Horukon?
Horukon aan loogu tala galay si ay ula qabsadaan mid ka mid ah mid ku heshay jar, waxa la sheegay in la musuq maasuqay karaa buro kasta oo ka ab dhowr.
Dabcan, sida in, sida shan cutub ka dhamaadka dukaanka waa in ay kooxdu, iyo tan la abuuro laga yaabaa in sida mass fudud, maxaa yeelay lahaa si cad laga shakiyo in aad ka fikirto, ama waxaa u boodboodeen mid, Kakudai ama ama, qaybsan lambarka mishiinka kasta, gasiirad kastaaba, iyo wixii la mid ah, waxaa jira qaab by dukaanka kala duwan. By dhex arko, u kordhiyaa jaaniska si aad u hesho taagan oo xoog leh.
Horukon waxaa sidoo kale maqlay hadal ah in sidoo kale noqon kartaa sida in ay kubada ka soo sii daayo kaliya waqti cayiman. inta badan waa maxay in ay isku dayaan in ay sii daayaan heshay ee ay dukaanka kasta oo zone waqti, laga yaabaa in aad u soo galeen view by dhigata dheer. Tusaale ahaan, hawlgalka waa in zone waqti si ay u noqdaan ugu sarreysa, sida aad ku kaydiso laga yaabaa in aad rabto in aad racfaan macaamiisha kale in ay sii daayaan heshay ee, subaxdii, iyo sii daayo zone waqti yar oo dhagaystayaasha, doorbidayey joogtada ah waxay si buuxda u suurto gal ah sheeko ee suurtogalka ah.
ama sii socday ee isla maalintaas ee toddobaadka, taariikhda
zone waqti, waa suurtowdaa caado soo baxa in ay si taxadar leh lagu arkay. Maalinta mushaarka ka hor ama ka yara macaan, sidaas on ama macaan waa ka wanaagsan yahay maalmaha shaqada. Fadlan isku day si ay u dhawraan sifooyinka of dukaanka uu marayo waa.
Horukon waxaa loogu talagalay faa'iidada iyo khasaaraha u qaybsan yahay, dadka qaar ayaa u malaynaya in aad isticmaasho tiro ka mid ah dukaamada, waxaa jira dad aan isticmaali waxaas oo kale doonaa. sidoo kale waxaan dhihi lahaa, waa wanaagsan oo ku saabsan habka qabashada Horukon. marka laga reebo ama xun Horukon waa wanaagsan yahay, sida iska cad miiska gaar ah, jasiiradda gaar ah oo keliya, maxaa yeelay, waan arki goobta uu ku qarxay kaliya waqtiyada qaarkood ee maalinta. Inkasta oo khamaar
, dukaan pachinko ogaado Ha joojin bixinta ugaarsiga iyo faa'iido.
Sidoo kale, marka u fulineynin nooc gaar ah oo dhacdo (tusaale ahaan :! Eva dhexdhexaadin lixaad), dhab ahaantii kaliya sixitaanka ciddiyaha, ama ay awoodaan in ay la filanayaa kor Eva ee jasiiradda ahaan doontaa? No arrinta sida dhidib Gabagaba, kan aadan rabin in la furo marka toos ah wax badan ayaa laga arki karaa, Sidaas daraaddeed, in la yidhaahdo in, istaag sida itimaalka weyn hit waa 1/400 waa, sidoo kale ay awoodaan in ay superimpose a haboon Ghanna waxa unugyada noqon doonaa UGA?
qarka u saaran inay ku dhow dhacdo noocan oo kale ah, waxaa lagu ogaaday in ay hubiso Robo xogta. Ma si cad u Sayga itimaalka hit weyn waxaa sare. Wax noocan oo kale waa dhacdo maalin kasta. Waxaan ahay in Sidaas marka la eego hab ilaa xad gaar ah Horukon qabtay, halkaas ma joogo in mowqifka wanaagsan.